Hay'adda Caafimaadka oo soo saartay Dadka Qaadanaya Talaalka Afaraad iyo Waqtiga ay Qaadan karaan
HomeWararka CaalamkaHay’adda Caafimaadka oo soo saartay Dadka Qaadanaya Talaalka Afaraad iyo Waqtiga ay Qaadan karaan
January 22, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta, Wararka Sweden 0
Hay’adda caafimaadka dadweynuhu waxay ku talisay in dadka qaangaarka ah ee qaba difaac la’aantu ay qaataan qiyaasta afraad ee tallaalka Corona saddex ilaa afar bilood ka dib qiyaasta saddexaad.
Maamulka ayaa ku sheegay war-saxaafadeed ay maanta soo saareen, in tani ay sabab u tahay “baahida loo qabo ilaalin dheeraad ah oo loogu talagalay dadka difaaca jirkoodu hooseeyo.” Sida laga soo xigtay SVT.
Kuwa ay hayso difaac la’aantu waxay ka dhigan tahay dadka lagu tallaalay xubin ama unug unug, bukaannada qaba leukemia ama qanjidhada, iyo sidoo kale kuwa qaba cudurrada kelyaha ee daba-dheeraada, iyo kuwa kale oo ay la ildaran yihiin jawaab-celinta hoose ee unugyada difaaca jirka. Waxaa lagula talinayaa inay qaataan qiyaasta afaraad saddex bilood ka dib qiyaasta saddexaad.
Dadka kale ee qaba difaac la’aan daran ayaa lagula talinayaa inay qaataan qiyaasta afraad afar bilood ka dib qiyaasta saddexaad.
Maamulka ayaa ku qoray boggooda in dhakhaatiirtu ay go’aan ka gaaraan qofka la siinayo tallaalka afaraad.